Gobolka Sanaag | allsanaag
Gobolka Sanaag oo ah goboka labaad ee ugu weyn sideed iyo tobonka gobol ee dalka Soomaaliya, ayaa waxa ka been sheegay sida loo wada degan yahay maamulka SNM oo ay samaysteen beelaha Isaaq, iyaga oo ku marin habaabibnaya bulshada Caalamka
Gobolka Sanaag wuxuu ka kooban yahay shan degmo oo kala ah:
Degmada Ceerigaabo, Degmada Ceelafweyn, Degmada Dhahar, degmada Badhan iyo degmada Laasqoray. Beesha isaaq waxay ka degaan xaafad ka mid ah degmada Ceerigaabo iyo degmada Ceel Afweyn. Halka beesha Warsangeli ay degaan gobolka degmooyinka Dhahar,Ceerigaabo, Laasqoray, iyo Badhan. waxa kale oo jira magaaloyin la mid ah ama ka waaweyn degmooyinka Soomaaliya sida Xingalool, Buraan, Hadaaftimo, Yube iyo Ceelaayo. Waxa kale oo jira 40 Tuulo oo beesha Warsangeli ka degaan gobolka Sanaag oo ay ka mid ayihiin Daara salaam, Maraje, Cawsane, Mindigale, Ceel buh, Bali busle, baraagaha qol, Damala xagar, Dhabar dalool , Biyo gudood, Shimbirale, carmale, Wardheer, Tooraboora, Cad cado, Dur duri, Gacan, Xabaal shaawacle, Ceel la helay, Beeraara, Xidid, Xamur, Ceel La Qoday, Gebi dheer, HarWeyn iyo Qoraxjiif.
Juqraafi ahaan mar haddi gobolka Sanaag yahay gobolka labaad ee Somaaliya ugu dhulka weyn, intee ayeey ka degaan beesha Isaaq?.
Xaafad ka mid ah Magaalada Ceerigaabo ilaa xeebta badda cas ee waqooyiga magaaladaas, oo la mid ah inta ay isu jiraan Badhan iy Laasqoray waxa dega beesha isaaq.
Galbeedka Xaafdda Dayacan ee magaalada Ceerigaabo ilaa xadka gobolka Togdheer oo qiyaastii ah 55km waxa dega beesha Isaaq. Halka bartamaha magaalada Ceerigaabo ilaa duleedka magaalada Boosaaso oo ah xadka labada gobol ee Sanaag iyo Bari ay degaan beesha Warsangeli, dhulkaas oo lagu qiyaaso baaxadda dhererkiisa ku dhowaad 400km. Xeebta Badda Cas ilaa xadka gobolka Nugaal oo qiyaastii ah 400 Km waxa dega beesha Warsangeli. Koonfurta magaalada Ceerigaabo ilaa xadka gobolka Sool waxa dega beesha Dhulbahante.
Gebagebadii Juqraafiga oo aduunka ku qiimeeyo degaanka iyo dadka ku nool ayaa beesaha Warsangeli gobolka Sanaag waxay ka degaan boqolkiiba Todobaatan. Waxa kale oo cadayn buuxda ah maamulkii SNM oo shalay ka been sheegay bulshada waqooyiga Soomaaliya iyaga oo beesha caalamka ka dhaadhicinayey in boqolkiiba sagaashan in ka badan bulshadaasi ay u codeeyeen , ayaa iyaga oo maanta sadbursi degaan sheegasho raadinaya oo an horay looga baran inay run sheegaan waxay beesha Warsangeli u qireen in gobolka Sanaag ay ka degan yihiin boqolkiiba Afartan. Qof kasta oo Soomaaliyeed waa garan karaa xaqiiqda runta ah mar haddi maamulkii beenta iyo huuhaada badnaa uu qiray in 40% ay beesha Warsangeli ka degaan gobolka Sanaag , inay ka degaan gobolka inta ay sheegeen in ka badan
Allsanaag.com. Gaarhayaha gobolka Sanaag iyo Maakhir
← Shirqoolka SNM ee gobolka Sanaag Puntland oo Saldhiggii 4-aad Ka Dhagax Dhigay Magaalada Yubbe ee Gobbolka Sanaag. →